Warbixin ku Saabsan Doorashada Nigeria
Codbixinta ayaa shalay maalintii labaad ka socotay dalka Nigeria halkaas oo dadweynuhu ku soo dooranayaan Madaxweynaha iyo Xubnaha Baarlamaanka. Xaaladda Gobolka Niger Delta ayaa kor u kacday iyada oo taageerayaasha Mucaaradku ay ku eedaynayaan Guddida Doorashada wax is-daba Marin.
Ka dib markii ay shaqayn waayeen qaar ka mida qalabka loogu talo galay codbixintu ayaa guddida madax bannaan ee doorashada dalka Nigeria waxay ku khasbanaadeen inay maalin labaad furan illaa 350 goobood oo codbixin laga sameeyey oo ku yaalla guud ahaan dalka oo dhan. Arrimaha kale ee maalintii sabtida ee doorashadu dhacaysay la arkay waxaa ka mid ahaa in qalabka mishiinnada qaarkood ay akhriyi kari waayeen farihii codbixiyayaasha, taas oo amar lagu siiyey shaqaalaha ka hawlgelayey goobaha codbixintu inay iyagu hubiyaan macluumaadka codbixiyayaasha.
Waraaqaha codbixintu maba iman goob codbixineed oo ku yaalla magaalada Lagos oo lagu magcaabo Somolu, taasina waxay keentay in codbixiyayaasha loo sheego inay soo laabtaan maalinimada xigtay ee Axadda. Waxase goobtan dib loo furay duhurnimadii iyada oo qaar ka mida codbixiyayaashu ay goobtan ku jactadeen sida Rishikat Bashua, “aad baan uga xumaaday, weliba si aad ah, may ahayn inay noo sheegaan wax marmarsiinyo ah oo la xidhiidha dib u dhaca waraaqaha codbixinta. Waxay ahayd inaanu maalintii kowaad codayno, isla markaana qof kasti gurigiisa aado, laakiin taasi ma jirto oo weli waxay noo sheegayaan cudur daar” ayuu yidhi.
Madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa kala kulmay loollan xooggan Muhammadu Buhari ooh ore u ahaa sarkaal milateri haatanna hoggaamiyaha Xisbiga APC.